Foiben'ny varotra na varotra orinasa mpanamboatra tifitra - Fitaovan'ny China - Cixi Wenap International Trading Co., Ltd
Home > Products > PEX fitaovana fandoroana plumbing > Fiatoana varahina ho an'ny rafitra fananganana PEX > Toeram-pivarotana varahina na endri-teo
Product Introduction of Center for Brass Reduced or Tea End
Ny varahina PEX varahina dia ampiasaina ny fizotran'ny rano amin'ny roa. Ny fomba tsara hamakiana ny TEXPX dia: Side x Side x Top (Afovoany). Ohatra, ity fango PEX ity dia misy 1/2 " Ny habe eo afovoany (ambony) amin'ny tee: 3/4 " x 3/4 " x 1/2 " PEX. Ireo karazana PEX ireo dia fomba fametahana, natao tamin'ny ASTM F1807 ary mifandraika amin'ny Crimp na Clamp fifandraisana. Izany fitting dia ny fitsanganana amin'ny fironana manerantany amin'izao fotoana izao amin'ny fametrahana fanodinana axia. Amin'ny alàlan'ny fanamafisana ao amin'ny lavaka fanefitra, dia afaka manamaivana ny fahaiza-manao matanjaka tsy misy vola be loatra. Ankoatr'izay, ny peratra fanerena malefaka sy malefaka ihany koa dia mamela ny tombo-kase hermetika lavorary. Miaraka amin'ny fihenan'ny elanelan'ny PEX, tsy misy reraka loatra amin'ny fanjaitra sy tsipika, ny fiaraha-mientanam-pandehan'ny fantsom-piraisam-peo, ny fampitomboana sy ny famoahana axia dia manome antoka ny fahamendrehana 100%.
Product Parameter an'ny Centre Brass Reduced na Tea End
(1/2 "~ 1") x (1/2 "~ 1") dia ampiasaina matetika
Fihetseham-behivavy NPT, vehivavy vavy NPSM
Ny tady dia mifanaraka amin'ny ANSI / ASME B1.20.1
Ny OEM rehetra karazana OEM dia misy
100 --- 1000pieces izay miankina amin'ny famokarana famokarana
Fandefasana standard fonosana: Ny vokatra tsirairay ho fenoina amin'ny Polybag + Lables + Export Carton + Palette.
Azontsika atao ny manangona araka ny endriky ny famolavolanao. Ny fangatahana famindrana efamira dia ilaina amin'ny famenoana loko.
OEM mandidy 45 andro ny famokarana anisan'izany lasitra vaovao, Ilaina ny vokatra ilaina 30-35 andro aorian'ny
Ny endri-javatra sy ny fampiharana ny Foiben'ny varotra na ny endriky ny te
1) Lanjany maivana, mora entina sy mitondra
2) hery lehibe
3) Latsa-paka kokoa
4) Feo fanasambe
5) Tsy misy fantsona mihodina
6) mora ny mametraka
7) Loko: volafotsy, loko hafa vita vita
8) OEM / ODM miarahaba
9) Fahasalamana sy tsy misy poizina ary tsy misy atin'ny bakteria, mifanaraka amin'ny rano fisotro rano
10) Manohitra ny mari-pana (110) mahery amin'ny hery fiantraikany tsara (mihoatra ny 500Mpa)
11) Fialam-boly tsara
12) Maivamaivana ny rindrina anatiny mampihena ny fahaverezan'ny tsindry ary mampitombo haingana ny haavo
13) Vatana varahina vita tamin'ny varahina
14) Ny kiriodra na varahina dia matevina, miangona
15) Karazana: tee, elbow, mpivady.
16) Sariaka tsara indrindra ho an'ny fandefasana diplaoma amin'ny lozam-pifamoivoizana mahery vaika, fiakaran'ny tosi-drà avo sy haingam-pandeha
17) Mifandray amin'ny pipa PEX
Ny antsipirihan'ny vokatra momba ny foibe fihenam-bidy na endriky ny te
Packaging Details:Amin'ny carton / pallets / arakaraka ny fepetra takian'ny mpanjifa.
Hot Tags: Afovoan-trano mivalona vita amin'ny varahina na endrona, China, mpamokatra, mpamatsy, orinasa, vita avy any China, mividy, mividy, maimaim-poana, an-tapitrisany, volombava, vidin'ny vidin-tsolika,
Reducing Branch Tea Compression Center